Mampisara-bazana Fianakaviana ve ny Vavolombelon’i Jehovah? | Fanontaniana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Toba) Boligara Bosniaka Boulou Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Fitenim-paritra Alemà Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Javaney Kabyle Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kissi Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mende Mongol Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ngabere Nias Norvezianina Népali Oromo Ourdou Ouzbek Ouïgour (Sirilika) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Valencienne Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Mampisara-bazana Fianakaviana ve ny Vavolombelon’i Jehovah?
Miezaka mifandray tsara amin’ny mpianakavinay izahay Vavolombelon’i Jehovah, sady manampy ny hafa hanao toy izany koa. Ekenay hoe Andriamanitra no namorona ny fianakaviana. (Genesisy 2:21-24; Efesianina 3:14, 15) Nanampy olona maro eran-tany mba hanana fanambadiana sambatra sy maharitra ny toro lalana nomeny ao amin’ny Baiboly.
Manampy ny fianakaviana hifankatia ny Vavolombelon’i Jehovah
Miezaka mafy izahay mba hanaraka ny torohevitry ny Baiboly, satria manampy anay ho vady sy ray aman-dreny tsara kokoa izany. (Ohabolana 31:10-31; Efesianina 5:22–6:4; 1 Timoty 5:8) Na ny mpianakavy tsy mitovy finoana aza afaka ny ho sambatra rehefa mampihatra ny torohevitry ny Baiboly. (1 Petera 3:1, 2) Mariho ny tenin’ireto olona tsy Vavolombelona ireto, rehefa lasa Vavolombelon’i Jehovah ny vadiny:
“Niady be foana izahay nandritra ny enin-taona voalohany tamin’ny fanambadianay. Lasa be fitiavana sy nanam-paharetana kokoa anefa i Ivete rehefa lasa Vavolombelon’i Jehovah. Nanavotra ny tokantranonay ny fiovana nataony.”—Clauir, avy any Brezila.
“Nanohitra be aho rehefa nanomboka nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah i Chansa vadiko. Nieritreritra mantsy aho hoe mampisara-bazana fianakaviana ry zareo. Lasa tsapako anefa hoe ny Baiboly no tena nanampy ny tokantranonay.”—Agness, avy any Zambia.
Rehefa mitory izahay, dia resahinay amin’ny olona hoe nahoana ny torohevitry ny Baiboly no afaka manampy azy...
hahay hifidy vady
hiatrika ny taona voalohany amin’ny fanambadiana
hifandray tsara amin’ny rafozana
tsy ho tia mifamaly
Mampisy olana ao an-tokantrano ve ny hoe miova finoana ny iray amin’ny mpivady?
Ekena fa mampisy olana izany indraindray. Tamin’ny 1998, ohatra, dia nilaza ny fikambanana iray mpanao fikarohana fa mpivady 1 ao anatin’ny 20 no nanana olana lehibe rehefa lasa Vavolombelon’i Jehovah ny iray tamin’izy mivady.
Efa nambaran’i Jesosy mialoha fa mety hanana olana ara-pianakaviana izay mampihatra ny fampianarany. (Matio 10:32-36) Nilaza ilay mpahay tantara atao hoe Will Durant fa “nampangaina hoe mampizarazara fianakaviana ny Fivavahana Kristianina”, tamin’ny andron’ny Fanjakana Romanina. * Mbola ampangaina toy izany koa ny Vavolombelon’i Jehovah sasany amin’izao andro izao. Midika ve izany fa ilay mpianakavy Vavolombelona no rangory fototry ny afo?
Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona
Namoaka didy ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona rehefa nampangaina hoe mampisara-bazana fianakaviana ny Vavolombelon’i Jehovah. Nilaza izy io fa ny mpianakavy tsy Vavolombelona matetika no mahatonga an’ilay disadisa, satria ‘tsy ekeny sy tsy hajainy hoe manana zo hampihatra ny zavatra inoany ilay havany.’ Hoy koa izy io: “Tsy ny Vavolombelon’i Jehovah ihany no tratran’izany fa ny mpivady rehetra tsy mitovy finoana koa.” * Na dia misy manohitra aza anefa ny Vavolombelon’i Jehovah, dia miezaka foana izy ireo mampihatra an’ilay torohevitry ny Baiboly hoe: “Aza mamaly ratsy ny ratsy, na amin’iza na amin’iza. ... Raha azo atao, ka mbola miankina aminareo koa, dia mihavàna amin’ny olona rehetra.”—Romanina 12:17, 18.
Nahoana ny Vavolombelon’i Jehovah no mino hoe tokony ho mpiara-mivavaka aminy ihany no ho vadiny?
Milaza ny Baiboly fa tokony hanambady “ao amin’ny Tompo ihany” ny Kristianina, izany hoe hanambady olona mitovy finoana aminy. (1 Korintianina 7:39) Mampihatra an’izany ny Vavolombelon’i Jehovah, satria sady mifanaraka amin’ny Baiboly izany no mahasoa. Nilaza, ohatra, ny lahatsoratra iray navoakan’ny Journal of Marriage and Family, tamin’ny 2010, fa mifankatia kokoa ny mpivady “rehefa mitovy ny fivavahany sy ny fomba amam-panaony ary ny zavatra inoany.” *
Tsy mampirisika ny mpivavaka ao aminay hisaraka amin’ny vadiny tsy Vavolombelona anefa izahay. Hoy ny Baiboly: “Raha misy rahalahy manambady tsy mpino, ary manaiky hiara-mitoetra aminy ihany ny vadiny, dia aoka tsy hiala aminy izy. Ary raha misy vehivavy manambady tsy mpino, ka manaiky hiara-mitoetra aminy ihany ny vadiny, dia aoka tsy hiala aminy izy.” (1 Korintianina 7:12, 13) Mankatò an’io didy io ny Vavolombelon’i Jehovah.
^ feh. 17 Jereo ilay boky hoe Caesar and Christ, pejy 647.
^ feh. 18 Jereo ny didim-pitsarana navoaka tamin’ilay raharaha Vavolombelon’i Jehovah any Moscou sy ny Hafa Miady Amin’i Rosia, pejy 26-27, fehintsoratra 111.
^ feh. 20 Jereo ny Journal of Marriage and Family, boky faha- 72, laharana faha-4, (Aogositra 2010), pejy 963.
Diniho ireo toro lalana 5 avy ao amin’ny Baiboly, izay hanampy anao ho ray be fitiavana sy mahay mandanjalanja.